प्रधानमन्त्रीले त नयाँ जनादेशबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन भनेर प्रष्ट भन्नुभएको छ : महन्थ ठाकुर (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रधानमन्त्रीले त नयाँ जनादेशबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन भनेर प्रष्ट भन्नुभएको छ : महन्थ ठाकुर (भिडिओसहित)
प्रकाशित मिति : 2021 April 5, 9:54 am
काठमाडौं, २३ चैत्र । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले केपी शर्मा ओली निर्वाचित प्रधानमन्त्री र निर्वाचित अध्यक्ष भएको र सरकारमा पनि ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ जनादेशबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन भनेर प्रष्ट रुपमा भनेको पनि स्मरण गराए ।
हिजो राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धन बनाउने भनेर चर्चा चलेपनि अहिलेसम्म गठबन्धन नबनेको स्पष्ट पारे । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको त लाईन स्पष्ट रहेको तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको लाईन क्लियर नभएको पनि गुनासो पोखे ।
उनले कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर निर्णय गरेपनि त्यो कसरी सम्भव होला ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले आफूसँग कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भेटवार्ता गरेको र गठबन्धन बनाउन आग्रह गरेको भएपनि आफूले पहिला तपाईँहरु क्लियर हुनुहोस भनेको पनि सुनाए ।
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) भित्र भाँडभैलोको बास्तविकता यस्तो छ, रावल र कार्कीबीच कार्यक्रममा घम्साघम्सी (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २० असार । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भातृ संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) को विवादको बारेमा
जसपाबाट मन्त्री बन्न लागेका यी हुन नयाँ अनुहार
काठमाडौं, असार २० । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले तीन जना पुराना मन्त्रीलाई फिर्ता
‘अपहरणको एम्बुस थाप्ने’ सुरेन्द्र यादवलाई फेरि झड्का
काठमाडौं, २० असार । तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी फुट्न लाग्दा बचाउन सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको
उपेन्द्र यादवको चलाखीः बाबुरामको गुट छाड्नेलाई मन्त्री
काठमाडौं, २० असार । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले डा. बाबुराम भट्टराईलाई धक्का दिने
माओवादी केन्द्रिय समिति बैठकमा आज प्रदेश संयोजकहरुले रिर्पोटिङ गर्दै
काठमाडौं, २० असार । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को दोस्रो दिनको केन्द्रिय समिति बैठकमा प्रदेश संयोजकहरुले रिर्पोटिङ
जसपा नेपालले सिफारिस गर्‍यो चार मन्त्री, सम्भवतः आजै सपथ
काठमाडौं, २० असार । आन्तरिक कलहमा मुछिएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल)ले अन्ततः ४
काठमाडौँ,२० असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु १८ अर्ब एक करोड ६५ लाख पचास हजार
माँ कालीले चुरोट पिउँदै गरेको पोस्टर बाहिरीएलगत्तै निर्मातालाई पक्राउ गर्न माग
एजेन्सी, २० असार । चलचित्र निर्माता लीना मणिमेकलाईले आफ्नो वृत्तचित्र ‘काली’ को पोस्टर सार्वजनिक गरेकी